प्रचण्डलाई अशोक राईको कटाक्षः किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले !
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का वरिष्ठ नेता अशोक राईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको सही ठाउँ सडक नै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विटघनको कदमबिरुद्ध पोखरामा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावको फाइदा हेरेर ओलीसँग लागेकाहरुको सही ठाउँ सडक नै भएको बताएका हुन् ।
'एकथरीले हामी यहाँ छौं भनेर टाँस्नुभयो । तपाईंहरु त्यहीँ हुन लायक हुनुहुन्छ', नेता राईले भने ।
आफूहरुले प्रचण्डलाई ओलीसँग नलाग्न भने पनि प्रचण्ड फाइदाका लागि लागेको उनको टिप्पणी थियो । उनले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे, 'किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले !'
नेता राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनाव हार्ने निश्चित भएकाले बालुवाटार छोड्ने तयारी गर्न सुझाए । 'केपी ओलीजी, बालुवाटारबाट गुन्टा कसेर डेरा सर्ने तयारी गर्नुस्', उनले भने । आफ्नो घरभित्रको झगडा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा पोखेको र त्यो कदम सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ६ महिनामा सरकारले १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोभन्दै सरकार ओली सरकार असफल भईसकेको पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, १७:१०:००